Sida loo ogaado wararka Telegram | Madasha Mobile
Sidaan kuugu wargalin lahayn wararka Telegram -ka
Cristian Garcia | 12/10/2021 17:43 | telegraam
Waqtigan xaadirka ah dhammaanteen waan ognahay in Telegram -ku yahay mid ka mid ah codsiyada farriimaha deg -degga ah ee ugu wanaagsan adduunka oo dhan. Iyada oo ku xidhan waddanka aad joogto, xitaa waa kan ugu badan ee la isticmaalo ama aan la isticmaalin. Dalka Spain waxaa sii kordhaya kuwa raacsan oo u mahadnaqaya teknolojiyaddeeda badan laakiin wax walba waxaa ugu sarreeya nabadgelyadeeda.
Codsiga sidaas oo kale ah aad buu uga duwan yahay WhatsApp, kaas oo kaliya ku kooban fududeynta wada xiriirka dadka. Telegram -ka waxaad ku sii socon kartaa oo aad ka ogaan kartaa waxyaabo badan adigoo uga mahadcelinaya kanaalada, wax ka duwan kooxaha aan si faahfaahsan u sharxi doonno. Haddii aad xiisaynayso wax ka ogow wararka Telegram, waxaad ku baran doontaa mahadsanid kanaalka.
Sababtoo ah haa, haddii aad ka timaaddo WhatsApp waxaad u baran doontaa inaad abuurto kooxo saaxiibo ah, asxaabtaada ama qoyskaaga ah iyo inay halkaas ku hadlaan, muddo. Oo mid walba wuxuu ku gudbiyaa xiriiriyadiisa macluumaad ama hadiyado, fiidiyowyo, sawirro, iwm. Laakiin waa in Telegram -ka aad ku dhex jiri karto kanaallo in ay ku siiyaan warbixin maalinle ah, sidii haddii ay ahayd warkii, laakiin abka moobiilkaaga.
Xaqiiqdii, maahan inay Telegram -ka ku jiraan kanaallo warar oo kaliya, ee waa inay jiraan mowduucyo kala duwan: farsamada, ciyaaraha fiidiyowga, anime, muusig, akhris iyo liis dheer oo mowduucyo ah taas oo aynaan halkan ku darin maxaa yeelay waxay noqon doontaa mid aan xad lahayn. Laakiin waxaan kaa tagi karnaa mid ama mid kale haddii ay dhacdo inaad xiiseyneyso inaad gasho, laakiin taasi gadaal bay noqon doontaa. Hadda waxaan ogaan doonnaa farqiga u dhexeeya kooxaha iyo kanaalada ka dibna waxaan ku siin doonnaa kanaalada wararka oo aad ka geli karto barnaamijka Telegram -ka.
1 Farqiga u dhexeeya kanaalada iyo kooxaha Telegram -ka
2 Kanaalka wararka ee Telegram
2.1 Kanaalka telegram ee ku saabsan wararka guud
2.2 Kanaalka Telegram ee wararka teknolojiyada
2.3 Kanaalka Telegram ee ku saabsan wararka muusikada
2.4 Kanaalka Telegram ee ku saabsan wararka ku saabsan horudhaca filimada iyo taxanaha
2.5 Kanaalka Telegram ee wararka isboortiga caalamiga ah iyo kuwa qaranka
2.6 Kanaalka Telegram ee ku saabsan wararka ciyaarta fiidiyaha iyo barnaamijyada nooc kasta leh
2.7 Kanaalka Telegram ee ku saabsan wararka ka imanaya hay'adaha rasmiga ah ee Dowladda Spain iyo maamulka
Farqiga u dhexeeya kanaalada iyo kooxaha Telegram -ka
Si aad awood ugu yeelatid inaad gasho kanaallo ku wargeliya mowduuc kasta, waxaa lama huraan ah inaad tan ogaato, sababtoo ah kuma dhammaan bogagga waxaad ka heli doontaa warar ama waxaad raadineyso. Labadaba koox Telegram ah iyo kanaalada (in kasta oo ay ka sii dambeeyaan) waxay yeelan karaan boqolaal isticmaale firfircoon. Laakiin waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya labadaas oo ay tahay inaad ogaato.
Kooxaha Telegram -ka ayaa asal ahaan ah sheekaysiga dadka ay abuureen dadka halkaas oo aad wax ku wadaagi karto. Qof walba wuu hadli karaa. Waxaa jiri doona kooxo dadweyne ama kooxo gaar ah laakiin ugu dambayntii waxay wax u tahay qof walba meesha uu joogo isgaarsiintu waxay ka timaadaa labada dhinac, kuwa wax abuura iyo kuwa hadha. Sida iska cad waxaa jiri doona xeerar, maamuleyaal iyo wax noocaan ah, laakiin aakhirka casuumaad iyo martiqaad la’aan markaad gudaha gasho waxaad awoodi doontaa inaad hadasho haddii aysan ku tuurin.
Taas lidkeeda kanaalka isgaarsiintu waxay ka socotaa maamulaha ilaa dadweynaha, laakiin waligeed kama timaado dadweynaha ilaa maamulaha. Kanaalka Telegram -ka hal xubin kaliya ayaa farriimo u diri doona. Kani waa farqiga ugu weyn ee u dhexeeya koox iyo kanaal waana meesha aad ka heli doonto kanaalada wararka Telegram, ciyaaraha fiidiyaha, akhrinta, dalabyada iyo mowduucyo kale oo aan hore kuugu sheegnay.
Sida kooxo badan, Kanaaladan waa kuwo dadweyne waadna ku biiri kartaa mar kasta oo aad rabto. Ilaa iyo inta aad leedahay URL toos ah kanaalka, waad awoodi doontaa inaad gasho. Waxaa jira faahfaahin yar, maanta kanaallo badan ayaa durba u shaqeeya koox ahaan maxaa yeelay barnaamijku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku xirato sheekaysiga kanaalka. Sidaa darteed, mar kasta oo farriin cusub lagu soo daabaco kanaalka, waxaad awoodi doontaa inaad ku bilowdo wadahadal isla farriintaas jawaab ahaan. Qayb ahaan waxaa jira xoogaa is -dhexgal ah, laakiin aan dhahno farriinta maamulaha ayaa had iyo jeer adkaan doonta oo sii ahaan doonta.
Hadda oo aad tan ogaatay, waxaan sii wadi karnaa inaan ku siino ururinta kanaalada, laga bilaabo kanaalada wararka. Si kastaba ha ahaatee, maadaama aanan ka warqabin danahaaga, waxaan kuu qori doonnaa mowduucyo badan, tan iyo Waxaa laga yaabaa inaad xiisaynayso wararka ku saabsan teknolojiyadda, ciyaaraha fiidiyowga ama xitaa ku saabsan ka faa'iideysiga dalab.
Kanaalka wararka ee Telegram
Si aad u gasho waa inaad ka raadsataa iskuxirka tooska ah boggooda shabakadda ama aad tagtaa Telegram iyo mashiinka raadinta kooxaha iyo kanaalada, ku qor magacooda. Ma aha inay kugu kacdo inaad hesho midkood, maadaama ay yihiin kanaallo leh kumanaan iyo kumanaan taageerayaal maalinle ah oo maalin walba la cusbooneysiinayo.
Kanaalka telegram ee ku saabsan wararka guud
Kanaalka Telegram ee wararka teknolojiyada
Kanaalka Telegram ee ku saabsan wararka muusikada
Muusikada Anuel AA
Trance & Horusocod
Kanaalka Telegram ee ku saabsan wararka ku saabsan horudhaca filimada iyo taxanaha
Filimada Hollywood HD
Filimada, Taxanaha iyo Majaajilada
Kanaalka Telegram ee wararka isboortiga caalamiga ah iyo kuwa qaranka
Charlie Picks Bilaash
Xusuus -qorka Calaamadda
Kanaalka Telegram ee ku saabsan wararka ciyaarta fiidiyaha iyo barnaamijyada nooc kasta leh
Bulshada APK FULL PRO Dib u dhashay
Kanaalka Telegram ee ku saabsan wararka ka imanaya hay'adaha rasmiga ah ee Dowladda Spain iyo maamulka
Wasaaradda Waxbarashada iyo FP
Hoolka Magaalada Vall d'Uixò
Hoolka Magaalada Sueca
Guriga Magaalada Calp
Golaha Magaalada Cártama
Guriga Magaalada Girona
Guriga Magaalada Benicarló
Hoolka Magaalada Sant Celoni
Xarunta Magaalada Seville
Hoolka Magaalada Seva
Golaha Magaalada Benalmádena
Vilaplana Town Hall
Hoolka Magaalada Cullera
Golaha Magaalada Conil
Hoolka Magaalada Tordera
Hoolka Magaalada Valldemossa
Xarunta Magaalada Botarell
Golaha Magaalada Guadalcanal
Hoolka Magaalada Badalona
Guriga Magaalada Béjar
Hoolka Magaalada Puente Genil
Hoolka Magaalada Velayos
Guriga Magaalada Torrebaja
Guriga Magaalada Quart
Hoolka Magaalada Huétor Vega
Golaha Magaalada Palomares del Río
Golaha Magaalada Sestao
Kani waa muunad yar oo ah tirada kanaalada aad ka heli karto Telegram. Waan sii wadi karnaa laakiin adiga ayaan kuu daynnaa inaad wax ka weydiiso ama aad na weydiiso nooca kanaalka aad rabto. Si kastaba xaalku ha ahaadee waxaan ku darnay kanaallo mowduucyo badan.
Waxaan rajaynaynaa in maqaalkani waxtar lahaa iyo in wixii hadda ka dambeeya Ogow farqiga u dhexeeya kanaalka iyo kooxda Telegram -ka. Laakiin wax walba waxaan ka rajaynaynaa inaad heshay kanaalka wararka ee aad xiisaynaysay inaad hesho, ha ahaado maado ama mid kale. Shaki kasta ama soo jeedin, wax kasta oo ay tahay, waxaad kaga tagi kartaa sanduuqa faallada ee aad hoosta ka heli doonto. Waxaan kugu arki doonaa maqaalka Madasha Mobile -ka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Shabakadaha Bulshada » telegraam » Sidaan kuugu wargalin lahayn wararka Telegram -ka